Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Wejigaagu waa aqoonsigaaga cusub ee socdaalka: Biometrics waa ok!
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • News • Technology • Dalxiiska
Marka la eego dukumeenti dheeri ah oo lagu hubinayo COVID-19, waqtiga ka shaqeynta garoonada diyaaradaha ayaa qaadaneysa waqti dheer. Kahor COVID-19, celceliska rakaabku waxay ku lumiyeen 1.5 saacadood geedi socodka safarka (hubinta, amniga, kontoroolka xuduudaha, kastamka, iyo sheegashada shandadaha). Xogta hadda jirta waxay muujineysaa in waqtiyada ka shaqeynta garoonku ay noqdeen buufin ilaa 3 saacadood inta lagu jiro waqtiga ugu sarreeya oo leh mugga safarka oo kaliya 30% heerarka kahor-COVID-19.
Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka Sahanka Rakaabka Caalamiga ah ee 2021 (GPS), kaas oo soo saaray laba gunaanad oo waaweyn:
Rakaabku waxay rabaan inay isticmaalaan aqoonsiga biometric haddii ay dedejiso hababka safarka.
Rakaabku waxay rabaan inay waqti yar ku qaataan safka.
"Rakaabku way hadleen oo waxay rabaan in tignoolajiyadu ay si adag u shaqeyso, markaa waxay ku qaataan wakhti yar 'in lagu farsameeyo' ama inay safafka ku jiraan. Waxayna diyaar u yihiin inay isticmaalaan xogta biometric haddii ay natiijadan keento. Kahor inta aysan taraafikada kor u qaadin, waxaan heysanaa daaqad fursad ah si aan u hubinno soo laabashada safarka kadib faafitaanka iyo gaarsiinta hagaajinta waxtarka muddada-dheer ee rakaabka, diyaaradaha, garoomada diyaaradaha, iyo dowladaha, "ayuu yiri Nick Careen, Ku-Xigeenka Sare ee IATA ee Hawlaha. Badbaadada, iyo Amniga.
73% rakaabku waxay diyaar u yihiin inay wadaagaan xogtooda biometric si ay u horumariyaan hababka gegida dayuuradaha (ilaa 46% sanadka 2019).
88% ayaa wadaagi doona macluumaadka socdaalka ka hor inta aan la dhoofin habaynta degdega ah.
In ka badan saddex meelood meel rakaabka (36%) waxay la kulmeen isticmaalka xogta biometric marka ay safrayaan. Kuwaas, 86% waxay ku qanacsan yihiin waayo-aragnimada.
Ilaalinta xogta ayaa weli ah arrin muhiim ah iyadoo 56% ay muujinayso welwelka ku saabsan jebinta xogta. Rakaabkuna waxay rabaan in la caddeeyo cidda xogtooda lala wadaagayo (52%) iyo sida loo isticmaalo/maareeyo (51%).
55% rakaabka ayaa safka fuulaya u aqoonsaday meel sare oo horumar ah.
41% rakaabka safka ugu jira baarista amniga ayaa u aqoonsaday mudnaanta koowaad ee horumarinta.
38% rakaabka ayaa loo aqoonsaday wakhtiga safafka ee kontoroolka xuduudka/ socdaalka inuu yahay meesha ugu sareysa ee horumarinta.
Kordhinta ugu badan ee sugitaanku waa hubinta iyo kontoroolka xuduudka ( socdaalka iyo socdaalka) halkaas oo shahaadooyinka caafimaadka safarka lagu hubinayo inta badan waraaqo ahaan.
Tani waxay ka badan tahay wakhtiga ay rakaabku rabaan inay ku qaataan hababka garoonka diyaaradaha. Baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in:
85% rakaabku waxay rabaan inay ku qaataan wax ka yar 45 daqiiqo hababka garoonka diyaaradaha haddii ay ku safrayaan shandad gacmeed oo keliya.
90% rakaabku waxay rabaan inay wax ka yar hal saac ku qaataan hababka garoonka markay ku safrayaan boorso la hubiyay.
IATA, oo la shaqeyneysa daneeyayaasha warshadaha, waxay leedahay laba barnaamij oo qaan-gaar ah kuwaas oo taageeri kara kor u qaadista guuleysiga duulista ee faafitaanka ka dib oo siisa socotada khibradda degdegga ah ee ay dalbanayaan.
IATA Safarka Safarka waa xal lagu maareeyo tirada badan ee shahaadooyinka caafimaad ee safarka ee dawladuhu u baahan yihiin. Appku wuxuu bixiyaa hab badbaado leh oo badbaado leh oo dadka socotada ah si ay u hubiyaan shuruudaha safarkooda, helaan natiijooyinka baaritaanka oo ay iskaan karaan shahaadooyinkooda tallaalka, xaqiijiyaan in kuwani ay buuxiyeen halka loo socdo iyo shuruudaha safarka oo ay si dhib la'aan ah ula wadaagaan saraakiisha caafimaadka iyo shirkadaha diyaaradaha ka hor intaanay dhoofin iyo isticmaalka. e-albaabada. Tani waxay yaraynaysaa safafka iyo cidhiidhiga hubinta dukumentiyada - si ay uga faa'iidaystaan ​​socotada, diyaaradaha, garoomada diyaaradaha iyo dawladaha.
Hal aqoonsi Waa hindise caawinaya warshadaha kala-guurka ee ku wajahan maalin ay rakaabku ka guuri karaan gees ilaa irid iyagoo isticmaalaya hal calaamad safarka biometric sida wejiga, faraha ama sawirka iris. Diyaaradaha ayaa si adag uga dambeeya hindisaha. Mudnaanta hadda waa in la hubiyo in uu jiro nidaam lagu taageerayo aragtida waayo-aragnimada safarka ee warqad la'aanta ah. Hal aqoonsi kaliya kama dhigi doono hababka kuwa wax ku ool u ah rakaabka, laakiin sidoo kale u ogolaanaya dawladaha inay si waxtar leh uga faa'iideystaan ​​kheyraadka qiimaha leh.
"Kaliya kuma laaban karno sida ay wax ahaayeen 2019 waxaanan fileynaa in macaamiisheena ay ku qanacsan yihiin. Faafida ka hor waxaan isku diyaarinaynay inaan is-adeegga u qaadno heerka xiga oo leh Hal aqoonsi. Qalalaasuhu wuxuu ka dhigayaa ballan-qaadkeedii mataanaha ahaa ee waxtarka iyo kharash-badbaadinta xitaa mid degdeg ah. Waxaanna gabi ahaanba u baahanahay tignoolajiyada sida IATA Travel Pass si aan dib ugu soo celino adeegii naftada ama dib u soo kabashada waxa buux dhaafi doona hubinta dukumeentiyada waraaqaha ah. Natiijooyinka GPS-ku waa qodob kale oo caddaynaya in isbeddel loo baahan yahay, "ayuu yidhi Careen.
Ku saabsan GPS-ka
Natiijooyinka GPS-ku waxay ku salaysan yihiin 13,579 jawaabo oo ka yimid 186 waddan. Sahanku wuxuu bixiyaa aragti ku saabsan waxa rakaabku ay ka jeclaan lahaayeen waayo-aragnimadooda safarka hawada. Booqo kan link si loo helo falanqaynta dhamaystiran.